Dariiqada Xaaxi iyo doorka waxbarasho | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Dariiqada Xaaxi iyo doorka waxbarasho
Waa maxay doorka waxbarasho ee ay kaga jirto dariiqada Xaaxi gobolka Dadmadheedh iyo nawaaxigiisa?. Hadaba waxa aynu odhan karnaa waa mid aad u facweyn doorkaasi, sidaynu hore uga soo warranay Xaaxi waa meel ku caan baxday barashada diinta Islaamka iyo maadigaba.
Hadaba tan iyo muddadii ay dariiqada Xaaxi jirtay waxa ka aflaxay waxna ka bartay arday aad u fara badan. Ardaydaasna qaar ka mid ahi waxa ay noqdeen culimo iyo mutacalimiin si fiican looga yiqiinay dhulka soomaalidu ay degto iyo deegaanka dariiqada Xaaxiba iyagoo qaar ka mid ahi ay macallimiin ka noqdeen dariiqada Xaaxi. Inkastoo ay culimadaas macallimiinta ka noqotay Xaaxi ay fara badnaayeen oo aynaan halkan ku soo koobi karin magacyadoodii iyo taariikh nololeedkoodiiba. Sidaa daraadeed waxa aan jeclaystay in aan qaar ka mid ah magacyadii macalimiintii dariiqada Xaaxi aan halkan iddin ku soo gudbiyo waxaanay kala ahaayeen sidan soo socota :-
⦁ Macallin Yuusuf Cabdiraxmaan
⦁ Sh. Muuse Cabdi Diiriye
⦁ Macallin Maxamed Nuux Xabiibu laahi
⦁ Macallin Aw Faarax
⦁ Macallin Aw Faarax Fiqi Sugulle
⦁ Macallin Shukri Xaaji Axmed Ducaale
⦁ Macalli Xasan C/kariim
⦁ Macallin Maxamed Cali Bullaale
⦁ Macallin AWMaxamuud Tahar
⦁ Macallin Cali Xasan Dhitiye
⦁ Macallin Saalax Macalin Shukri
Dhammaan Macallimiintaas aynu soo xusnay oo dhami waxa ay ahaayeen kuwii dariiqada Xaaxi dhidibada u taagay ee kuna bixiyey juhdiga iyo dadaalka .
Xaaxi waxa hadda ku yaalla laba iskuul, labada iskuul mid waxa la dhisay xilligii ay xukuumadii Maxamed Siyaad Barre Dalka xukumaysay midka labaadna waxa la dhisay 2007dii, waxaana dhisay dad muxsiniin ah, oo ka soo jeeda deegaanka gobolka Daadmadheedh iyo deegaano kale.
Iskuulkan oo ah mid hooy ah (Boarding School)waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah Diini iyo maadi. Qaybta diiniga waxa lagu bartaa cilmiga shareecada Islaamka iyo daraasaadkiisa. Qaybta maadiga waxa lagu bartaa dhammaan maadooyinka iskuulada lagu barto oo dhan.
Sidoo kale iskuulka waxa aasaasay dad Soomaalilander ah oo iskugu jira culimo, aqoonyahano, cuqaal, siyaasiyiin iyo waxgarad oo ku kala baahsan dalka gudihiisa iyo debediisa. Dadkaas oo ku heshiiyey in ay dhidibada u taagaan iskuulkan waxbarasho ee hooyga ah. Markey arkeen duruufaha dhaqaale ee dadkooda ku xeeran iyo baahida loo qabo in lahelo iskuul noocan oo kale ah. Waxa ay isla garteen in iskuulka lacag la’aan lagu dhigto “bilaash’’sidoo kale waxa ay isla qaateen dhinacyadu in la aas-aaso urur waxbarasho si hawlaha waxbarasho ee la qabanayo ay u fududaadaan.
Qoraa iyo Suxufi madax banaan Bariise_77@hotmail.com/www.facebook.com/maxamedbariise
Sidoo kale Maxamed Muuse Cilmi waxa uu buug ka qoray taariikhda dariiqada xaaxi oo ka mid ah dariiqooyinka ugu faca weyn Soomaaliland magaca buuga waxa layidhaah (Maxaad ka taqaan dariiqada Xaaxi ) waxaana la soo bandhigi doonaa bilaha fooda inagu soo haya insha Allah.